Xogtii Ugu Dambeysay Mooshinka Ka dhanka ah RW kheyre ee loo gudbiyay Gudoonka Aqalka Sare…[Yaa hor boodaya?] | AllJubbalandnews
Xogtii Ugu Dambeysay Mooshinka Ka dhanka ah RW kheyre ee loo gudbiyay Gudoonka Aqalka Sare…[Yaa hor boodaya?]
Published on August 21, 2017 by admin · No Comments
Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa fadhigii maanta ee Aqalka sare ka sheegay in Mooshin laga keenay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Mooshinkan oo ay gudbiyeen Xildhibaano uu hormuud u yahay Muuse Suudi Yalaxow ayaa ujeedkiisa yahay in Ra’iisul Wasaaraha wax laga weydiiyo Xiisada Hirshabeelle iyo go’aankii Xukuumadda ka qaadatay.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha xilli kasta loo yeeri karo, isla markaana diyaar u yahay inuu hor-yimaado, waxaana ka muuqatay inuu waxooga dhaliilsanaa qaabka mooshinka looga soo gudbiyay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu hortago Golaha Aqalka sare, isagoo su’aalo laga weydiin doono tallaabadii Xukuumaddiisa ugu taageertay go’aankii Baarlamaanka Hirshabeelle xilka ugu qaadeen Cali Cosoble.
Lama sheegin xilliga uu hor imaanayo Aqalka sare, waxaase uu noqonayaa mooshinkii u horeeyay ee Aqalka sare laga geeyo Madaxda dowladda Federaalka.
Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka ayaa maalintii Sabtida u yeeray Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo safar xaqiiq raadin ah ku tagay magaalada Jowhar, markii ay soo if baxday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Maamulka Hirshabeelle.
Aqalka sare ayaa matala dowlad goboleedyada, waxaana sanad ka hor soo doortay Xildhibaanada dowlad goboleedyada, waxaa la sheegaa inay mar walba u taagan yahay difaacida maamul goboleedyada ay rabitaankooda ku yimaadaan.